UGAAR AH RAGGA: Shantaan Waxyaabood ka eeg Gabadha aad guursaneysid, hadii aysan lahayn ka fogoow - Aayaha
Way fududahay inaad aragtid gabar qurux badan isla markaana aad ka heshid adigoo kadib isku dayaya inaad xiriir la yeelatid, taasi waa mid caadi ah balse waxaa la sheegay in taasi ay tahay muuqaalka kore uun.
Haddii aad gabar ku dooratid quruxdeeda oo aad hilmaamtid waxyaabaha muhiimka ah waa qasaaro.
Shantaan waxyaabood ka eeg gabadha aad dooraneysid.
Jacaylka ay kuu qabto
Jacaylka waa inuusan adiga kugu ekaan, waa inaad eegtaa jacaylka ay iyadana kuu qabto inta uu la egyahay sidoo kale.
Haddii aysan kuu jecleyn si dhab ah sial markaana aysan noqon Karin garabkaaga, dabadeed waxaa jira isku dheeli tirnaan la’aan oo ah tilmaan cilad u keeneysa xiriirka mustaqbalka.
Had iyo jeer ka eeg xushmadda, qiyaas sida ay kuu xushmeyso, waa inaad ka taxadartaa inaad xiriir la yeelatid gabar aanan ku xushmeyn, tani wanaag kuma dhamaaneyso.
Meel uu ka jiro jacayl balse uusan ka jirin isafaham waxaa ka dhalanaya xiisad iyo muran u dhexeeya adiga iyo lamaantaada, eeg isafahamka idinka dhaxeeya labadiina, oo dooro haweeney dhisi karta xiriir ku dhisan isfaham.
Dabeecaddeeda waa shay kale oo aad ku qasbantahay inaad ka eegtid, haweeney aanan dabeecad lahayn way adagtahay inay yeelato xiriir qurux badan, waa inaad hubisaa dabeecadeeda iyo haddii aad kula dhaqmi kartid.
Haddii ay si dhab ah kaa go’anyahay xiriirka, waa inaad sidoo kale qiimeysaa dhankeeda iyo haddii ay ka go’antahay, iska xaqiiji inay ka go’antahay in xiriirka uu guuleysto si lamid ah sidaad adiga diyaarka ugu tahay.
Markaad dhabarka u xiratid sidii uu xiriirka u guuleysan lahaa iyadana dhabarka uusan u xirneyn, jahwareer ayuu ku dhamaanayaa xiriirkaas.
Kuguma filna inaad ka heshid gabar qurux badan; waa inaad sidoo kale ka eegtaa shantaan waxyaabood.
Lamaanayaasha Guurkoodu Farxadda Ku Dhisanyahay Waa Kuwa Sameeyo Waxyaabahaan
Do this when he doesn’t treat you right in front of his friends
Wax Ka Ogoow Cuntooyinka Sare U Qaadi Karo Shaqada Sariirta